၂၀၂၀ နွေဦးမှာအတွက် ခေတ်စားလာမယ့် အရောင်တွေက ဘယ်အရောင်တွေဖြစ်မလဲ? – YANGON STYLE
၂၀၂၀ နွေဦးမှာအတွက် ခေတ်စားလာမယ့် အရောင်တွေက ဘယ်အရောင်တွေဖြစ်မလဲ?
ဆောင်းလည်းကုန်တော့မယ်ဆိုတော့ သာယာတဲ့နွေဦးကိုကြိုဆိုဖို့ အားလုံးပဲ တက်ကြွနေပါပြီ။ ဒါဆို ဒီနှစ်နွေဦး fashion စဉ်းစားမယ်ဆို ဘယ်အရောင်တွေကများ ခေတ်စားလားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ ခေတ်စားလာမယ့်အရောင်များက ကျွန်မတို့ ရဲ့တိုက်ဆိုင်စွာကျရောက်တဲ့ မဟာသင်္ကြန်အတွက်လည်း ကွက်တိဖြစ်လို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ၂၀၂ဝအတွက် ဘယ်လိုအရောင်တွေများ ခေတ်စားလာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်။
1. Flame Scarlet
ပထမဆုံးအရောင်တစ်ခုကတော့ မီးလျှံလို ရဲရင့်တဲ့ လိမ္မော်နီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ နွေးထွေးပြီး စွမ်းအင်ပြည့်ဝတဲ့ Flame Scarlet ကတော့ ယုံကြည်မှုကိုလည်းပေးစွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်း အနီရောင်ဝယ်မယ်ဆို ဒီလိုအနီမျိုးကို စမ်းကြည့်သင့်တယ်နော်။
2. Faded Denim
ဂျင်းပြာရောင် – မိုးပြာရောင်လေးကလည်း ၂၀၂၀ နွေဦး အရောင်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ အရောင်မှိုင်း ဖြစ်ပေမယ့် Trend ထဲပါဝင်လာပါတယ်။ အခြား အရောင်များနဲ့ လိုက်ဖက်လွယ်တယ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး ခု trend ဖြစ်လာမယ့်အရောင်တောက်တွေနဲ့တွဲစပ်ရလွယ်ကူတာက သူ့အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
3. Biscay Green
2019 တုန်းက စိမ်းစိုတဲ့ ကျောက်စိမ်းရောင်လေးက ပိုမိုခေတ်စားခဲ့ပါတယ်။ ယခုထိလဲ လူကြိုက်များရွေးချယ်နေတဲ့အရောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုနွေဦးအတွက်တော့ ငှက်ခါးရောင်လို့ခေါ်မလား ဒီလိုအစိမ်းရောင်လေးဟာ သဘာဝ ပန်းပွင့်လေးတွေအရောင်နဲ့ တွဲစပ်ပြီး လှပနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြလန်းဆန်းစေမယ့် Aqua shade ပဲဖြစ်ပါတယ်။
4. Coral Pink
ပန်းရောင်မှာမှ သန္တာပန်းရောင်လေးက ဒီနှစ်အတွက် မိန်းမဆန်စေမယ့် အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံလှပပြီး နွေးထွေးစေမယ့်အရောင်လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အချိန် အနေရာဒေသမရွေးလှပနေမယ့်အရောင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့နှစ်ပိုင်း fashion တွေမှာ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှှစ်မတူအောင် အဝါရောင်လိုင်းတွေက ကြီးစိုးနေတာကို သတိထားမိကျမှာပါ။ ၂၀၂ဝအတွက်ကတော့ ရွေဝါရာင်ပါတဲ့။ လိမ္မော်နဲ့ အဝါရောစပ်ထားတဲ့ ဒီအရောင်ကတော့ ထင်းကနဲ လင်းကနဲရှိစေမယ့် အရောင်ဖြစ်ပြီး လိုက်ဖက်အောင်ဝတ်စားတတ်မယ်ဆို လူအများကြားကွဲထွက်လှပနေမယ့်အရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးရှင်းဆုံးက အလှပဆုံးပါတဲ့။ ၂၀၂ဝအတွက်အဖြူရောင် ပါဝင်ပါတယ်နော်။ သန့်ပြန့်တည်ကြည်မှုမှာတော့ အဖြူရောင်ကို ဘယ်သူမှမမှီပါဖူးရှင်။ အဖြူရောင်ဆိုတာ ဝတ်စားသူရဲ့ fashion ပုံစံကိုလိုက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးတတ်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖြူရောင်မှာမှ ဇာ/ ဖဲ စတဲ့ fashion ဒီဇိုင်းတွေကခေတ်စားလာအုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့အရောင်လေးတွေကတော့ ၂၀၂၀ နွေဦးအတွက် နိုင်ငံတကာမှာခေတ်စားလာမယ့် trendy color တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ fashion show တွေမှာမြင်နိုင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ model မလေးတွေပုံနဲ့ နမူနာပြောပြပေးထားတာမို့ရာသီဥတုအနေအထားအရ သူတို့ကတော့ ဆွယ်တာအပါးလေးတွေကို ဝတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်အပူပိုင်းဒေသအတွက်တော့ ဖြစ်တည်လာမယ့်အတွဲအစပ်လေးတွေကို နမူနာယူနိုင်ပါတယ်။
Bonus အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ ၂၀၂၀ summer Color လို့ ရှာကြည့်တဲ့အခါ Top 6ထဲမှာမပါပေနယိ့ လူကြိုက်များပြီး Instagram မှာအများဆုံးတင်ထားတဲ့ 2020 the whole year trend color ကတော့ Classic Blue – အပြာရင့်ရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Classic Blue ကတော့ သူ့တစ်ရောင်ထဲကို fashion ကျအောင်ဝတ်နိုင်လေ အများနဲ့မတူကွဲပြာလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်နှစ်ရောင်ကတော့ စစ်စိမ်ရောင်နဲ့ စပျစ်ရောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဒါဆို နွေဦးမှာ အလှတမျိုးထူးဖို့ အရောင်လေးတွေကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလဲ ဘယ်လို ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေ ဆံပင်ပုံစံတွေ makeup lookတွေခေတ်စားလာမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
#TT #2020TrendColor #Summer #2020SummerTrendColor